Sarkaal Lagu Weeraray Degmada Yaaqshiid Ee Magaalada Muqdisho. – Calamada.com
Sarkaal Lagu Weeraray Degmada Yaaqshiid Ee Magaalada Muqdisho.
calamada November 26, 2016 1 min read
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxey saacadihii lasoo dhaafay weerar qorsheysan ku qaadeen sarkaal iyo maleeshiyaat la socday oo ku sugnaay hoteelka Golden oo ku yaala xaafada Suuq Bacaad ee degmada Yaaqshiid.
Weerarkan oo habeenkii xalay dhacay ayeey ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ku doonayeen iney ku dilaan sarkaalka Milatariga Ridada ka tirsan balse warar hoose waxey sheegayaan in sarkaalka uu ka badbaaday dilka lala doonayay.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in weerarkaasi lagu dilay saddex askari oo ka mid aheed ilaalada gaarka ah ee sarkaalka isku dayga dilka ah ka badbaaday’iyadoona tiro kale ay ku dhaawacmeen weerarkaasi.
Boqolaal ka tirsan maleeshiyaatka Ashahaado la dirirka ee isku magacaabay nabad sugid oo goobta dagaalka soo gaaray ayaa isku gedaamay Hotel Golden iyo waddooyinka jidcadyaasha ah ee soo gala waxayna goobta ka qaadeen Meydadka iyo dhaawacyada gaaray ciidanka DF-ka.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in sarkaalkii dilka ka badbaaday loola cararay dhanka xaafadda Boondheere ee kaabiga ku haysa madaxtootada Villa Somalia.
Weerarkan qorsheysan ayaa kusoo aadaya xilli saacadihii lasoo dhaafay qaraxyo ka dhacay qeybo ka mid ah wadada Warshadaha ee magaalada Muqdisho Kufaarta Afrikaanta looga gubay labo gaari oo kala ahaa Booyad iyo Taw sidoo kale qaraxyadaasi waxaa baqti iyo dhaawac ku noqday tiro askar ah oo ka tirsan shisheeyaha soo duulay.
Previous: Madaxweynihii Hore dalka Cuba Oo Geeriyooday.
Next: Qarax Culus Oo Ka Dhacay Gobalka Banaadir.